Xhumana Nokusekelwa Kwezobuchwepheshe
Izimpendulo zemibuzo eminingi.
Ulahlekelwe ukhiye wakho welayisense wohlelo lokusebenza lweMac noma lweWin oluthengwe ku-plumamazing.com?
Chofoza lapha ukuze uthumele kabusha nge-imeyili noma usebenzise imenyu ethi 'Ngena' kumenyu ephezulu kwesokudla.
Awukaze uwuthole ukhiye wakho welayisense?
Ithunyelwa nge-imeyili ngokuzenzakalela nerisidi ekhelini le-imeyili othenge ngalo isoftware. Ungahle ubhale kahle i-imeyili yakho. Noma kungaba kufolda yakho yogaxekile. Uma namanje ungayitholi, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho lapha noma sithumele i-imeyili lapho sithengisa.
Ngilahlekelwe noma ngasusa uhlelo lokusebenza engiluthengile ku-Apple App Store noma ku-Google Play, ngiliphinda kanjani?
Vele uyilayishe kabusha usebenzisa i-akhawunti / i-imeyili efanayo oyithenge ngayo. Ngemininingwane engaphezulu thepha kuzixhumanisi ukuze ufunde ukuthi ungalanda kanjani kabusha uhlelo lokusebenza othenge kulo Isitolo se-Apple iTunes noma kusukela Isitolo se-Google Play.
Ngikubuza kanjani imibuzo yokuthengisa kuzinhlelo zakho zokusebenza engizitholile ku-Apple App Store noma ku-Google Play?
Kuyo yonke imibuzo yokuthengisa thepha lapha.
Unenkinga yokusekelwa kwezobuchwepheshe? Ngaphambi kokuthumela i-imeyili sicela ufunde lokhu ukonga isikhathi:
Okokuqala, ngaphambi kokuxhumana nathi qiniseka ukuthi unenguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza. Ithole kusuka PlumAmazing.com uma kunguhlelo lokusebenza lwe-Mac noma lwe-Win noma i-Apple ye- iOS noma iGoogle uma Android
Okwesibili, qiniseka ukuthi useshe ibhukwana lesoftware ukuthola impendulo yombuzo wakho. Bona imanuwali kuhlelo lokusebenza noma kuhlu olungezansi.
I-iWatermark Pro Mac yKey (kwaba iKey) I-Alamu Encane Umenzi Wenkulumo
iWatermark iOS / Android CopyNamathisela I-PixelStick Uhlobo
iWatermark + iOS / Android Okubalulekile iClock Old iWatermark Mac / Win
Uhlelo lokusebenza luphahlazeka noma ngeke luqalise? Umbiko wokuphahlazeka usinikeza imikhondo yezobuchwepheshe enkingeni ngohlelo lokusebenza. Ukufunda ukuthumela umbiko wokuphahlazeka chofoza lapha.
Ngabe usenenkinga? Bhala kafushane imininingwane yenkinga bese uthatha izithombe-skrini ukucacisa imibuzo noma iziphakamiso bese usithumela leyo mininingwane ngezansi.
Impendulo yakho, izimbungulu kanye neziphakamiso ikakhulukazi zibalulekile ekusizeni izinhlelo zethu zokusebenza ukuthi ziguquke. Ngiyabonga!
Mac Win iOS Android Izincwajana zemininingwane
Isoftware (Khetha eyodwa)
None iWatermark + I-iWatermark Pro iWatermark iClock Okubalulekile YKey Umphathi wevolumu CopyPaste Pro I-CopyPaste (2022) I-Alamu Encane I-TinyCal I-PixelStick I-PhotoShrinkr Umenzi Wenkulumo
Inombolo yenguqulo yohlelo lokusebenza
Inombolo yenguqulo ye-OS
Kulandwe Kusuka Kusiphi Isitolo
Isitolo esimangalisayo sePlumIOS App StoreMac App StoreIsitolo se-Google Play
Uphenyo / Isiphazamisi / Isiphakamiso
Thumela izithombe-skrini noma izithombe uma zisiza ekuchazeni inkinga.